Papa Francis anoshevedza vatungamiriri venyika kuenda kuVietnam pa14 Mai 2020 kuti ipanganise nyika: Martin Vrijland
Papa Francis, Jesuit Musande Nicholas asina ndebvu-pane ndebvu, mutevedzeri waJesu Kristu pasi pano, akafonera 2 vatungamiriri vese vepasvondo rapfuura kuti vauye kuVictoria pa14 muna Chivabvu 2020 ye 'Global Pact' (chibvumirano chenyika). Pane zvinhu zviviri zvakakosha pahurongwa hwemusangano uyu apo munhu wese anofanira kuuya. Yekutanga inogona kuwanikwa mumazwi ake ekutanga mukutaura pazasi, maanoreva iye encyclical (gwaro rinorema repapa rorudzidziso) kubva ku2015, iri pamusoro 'pekuchinja kwemamiriro ekunze'. Yechipiri ndeye kukwirisa huwandu hwenyika.
'Ndipeiwo makore mana ekudzidzisa vana, uye mhodzi yandakadyara haizombodzurwa"ishoko rinozivikanwa naVladimir Lenin. Papa nokudaro anoda kuti vatungamiriri venyika vauye pamwe chete chibvumirano chepasi rose chinofanira kupedziswa pakati pevatungamiriri vese vepasi rose nezvitendero zvepasi rese. Chinhu chakakosha chehurongwa: kufambisa vana pfungwa. kuunganidzwa kwevatungamiriri vese vepasi zvakare kunhuhwidza kwazvo izvo zvaigaro saratidzika kunge zvakavanzika musangano mushure meiyo 'shanduko yemamiriro ekunze' PsyOp: kusikwa kwehurumende yenyika. (verenga zvakare pasi pevhidhiyo yeYouTube)
"Zvakanaka, kana zvichidikanwa kuti nharaunda dzitibatane pachinhu chepasi rose, ipapo icho chingori chirongwa chakanaka! Ipapa rakazonaka!", Vazhinji vangazofunga. Papa mumwe chete ari pamusoro wekereke uyo pa27 Kubvumbi 2014 yakazivisa Luciferi saMwari wekereke. Iwe unogona zvakare kunge usina dambudziko neizvozvo, nekuti "Ah zvakanaka kuti mwari ndiAllah here kana kuti Mwari murume kana mukadzi kana kuti Luciferi anonzi, mutsaukoi waunoita?Izvo zvine basa zvakanyanya zvekuti zvakakosha kuti iwe uwane kuti Lucifer ndiye anovaka uyu "zvisikwa"; chandinodaidza kuti 'kufungidzira'.
Chiratidzo cheLuciferianism muraraungu uye vatungamiriri venyika (vese vezvematongerwo enyika nevezvinamato) ndivo vanochengetedza uye varongi vetenzi script iyo inofanirwa kutungamira kuhurumende yenyika uye neyemharrodite huwandu huri kugadzirirwa 'denga idzva nepasi idzva'. Kuti "denga idzva nepasi idzva" kubva kuzvitendero ndizvo chaizvo fusion neAI; inonziwo kusarudzika. Icho chinangwa chaicho ndechekuti murume anozvipira kune transhumanism uye inobatwa muAI system iyo inodzora yedu (yenhema) chokwadi. Rega nditsanangure kuti pasi peiyo YouTube vhidhiyo.
Kana tikadzidza zviratidzo zvese zvakatikomberedza, hatigone kutadza kuwana kuti tiri kubata nechakavanzika (uye kubvira 27 Kubvumbi 2014 kunyangwe pachena) kunamatwa kwaLucifer (ona vhidhiyo pamusoro apa). Chinhu chinovhiringidza ndechekuti vanhu vane mamiriro echitendero vanowanzoenzana naLusifa nengirozi yakawa kubva mubhaibheri uye nokudaro naSatani. Ini ndinokumbira usiye pachirongwa chechitendero ichi. Chitendero chiri mukati meyemutambi-mutambi chaiwo simulative (iyo yatinoona) chimiro chekutonga kwepfungwa kuchengeta vanhu vari mumutsara kuburikidza ne (mbiri) yekutya modhi. Zvakare, zvitendero zvakasiyana zvinoumba polarity inodiwa kutumira iyo tenzi script mune yainoda nzira; sekuwedzera uye miniti matanda ebhateri inoburitsa rakananga mune imwe nzira. Izvo zvakakosha kuti iwe unzwisise kuti isu tinorarama mune simulative chaiyo (kana kuti "tinzwisise") saka zvakakoshawo kuti iwe ichi chinyorwa tanga waverenga zvakakwana. Zvikasadaro, zvese zvandinotaura apa zvinonzwika senge abracadabra yakakwana munzeve dzako.
Isu tinoona zvakajeka kuti chirongwa chinotenderera icho chinonongedza kazhinji uye munzira yaLuciferi. Iyo transgender kana 'yechikadzi' kusaparadzira kwanhasi kwanhasi kunotsigirwa nechiratidzo chemuraraungu. Iyo muraraungu irimo mumhando dzese dzengano uye dzezvitendero nyaya pasi rese, inomiririra pasi idzva shure kwemafashama (ona tsanangudzo. Mwari airatidza muraraungu usati wamboonekwa mumatenga sechiratidzo kumunhu. "Uye Mwari akati: "Ichi chiratidzo chesungano, yandinopa pakati pangu newe, nezvose zvipenyu zvinewe, kusvikira kumarudzi namarudzi nekusingaperi.”, Semuenzaniso, tinowana mubhaibheri. Naizvozvo chiratidzo chechitendero. Mune zvakasikwa, kuoneka kwemuraraungu mune mudenga ndiwo mhedzisiro yekubvhenekerwa kwechiedza. Mune chinyorwa chakanzi "Nei iyo transgender inova tsika itsva yeiyo 21 yezana uye iye murume nomurume vanonyangarika"Ndati Lucifer Mwari vari kuviga zvitendero zvese." Lucifer anonzi zvakare mutakuri wechiedza uye nekudaro kupaza kwemwenje mumarudzi ese erurarabungu chimwe chiratidzo chinoreva chiratidzo neinobata chinamato.
Chiratidzo chaLusifa bhuru-rine musoro Baphomet. Nekudaro, kuburikidza neBPBTI manyepo, hunhu hunofanirwa kushandurwa kuve "gadziriro yepamhepo" (izwi rakanaka re "hermaphrodite" kana "bisexual"). Iyo yekubatana pakati pechiratidzo che LGBTI kufamba (muraraungu) uye Lucifer ikozvino kwakajeka kwazvo kwauri. Isu tiri kupupurira chirongwa cheLuciferian chekushandurwa kwenyika. Panofanira kunge paine mafashama matsva. Uye mafashama ave pedyo. Kuburikidza ne transgenderism (takananga kumurume anonzi hermaphrodite bisexual man) isu takagadzirira transhumanism, kubatanidzwa neAI uye kusimuka kwedenga idzva nepasi idzva.
Mandiri bhuku idzva Ini ndinotsanangura muchidimbu kuti sei maporofita kubva pazvitendero zvakasiyana-siyana zvepasi rese anoita basa reiyo tenzi script, iyo inonyanya kuchengetedzwa neVatican uye neanoratidzira ropa. Ini ndinotsanangurawo kuti iwo maavatat mune iyi simulation inofambiswa neyakavakirwa iyi simulation. Ivo vanotumira iyo tenzi script yekunyengedza vanhu kuti vazvipire nokuzvidira kuzvirongwa zvaLuciferi. Izvo 'zvekuzvidira' zvakakosha, nekuti vatambi vekutanga vekunyepedzera (kuziva kwako) vanofanirwa kugara vaine sarudzo yemahara (kana zvisina kudaro yaisave yekufungidzira, asi yefirimu rekufungidzira). Zviporofita zvakasiyana siyana zvechitendero zvinotaura nezve kwekuuya kwemesiya kubva kudenga. Ehe, iwo akasiyana machechi ane maonero anopokana, asi kupokana ikoko kunodikanwa kumutsa iyo polarity iyo inotungamira kuhondo yekupedzisira yakakomberedza Jerusarema uye kugadzira kurongeka kunze kwekusagadzikana.
Iwo (anotarisirwa nevatendi) mesiya achazodaro chero aburuka kubva 'kudenga'. Mazuva ano tinowanzo pindana neizwi 'matenga' kana zvasvika pakuchengeta mafaera edu. Isu tinoita izvozvo 'mugore'. Mesiya we 'matenga matsva nepasi idzva' achazoburukawo kubva 'mugore' uye achitigonesa kuti tinogona kukwira nokuzvidira mu'denga nyowani nepasi idzva '. Ray Kurzweil (CEO kuGoogle) akafanofungidzira mubhuku rake 'Iyo Singularity iri pedyo' kuti mune ramangwana tichakwanisa kurarama mune simerals isingagoni kusiyaniswa kubva kune chaiyo. Ini ndinofanotaura kuti 'denga idzva nepasi' reMesiya anotarisirwa saka ichave yekufungidzira. Zvinoitirwa kuti vanhu vasiye chimiro chavo (izvo chaizvo zvisipo, nekuti isu tave "kurarama mukufungidzira") uye nekushandisa kuziva kwavo (izvo zvatiri chaizvo) neLuciferian AI (ino iripo nyika yechizvino) simulation inomhanya). Ini ndinotsanangura chinangwa cheizvi zvakawandisa mukati mangu bhuku idzva, asi inogona kupfupikiswa seinotevera: Hutachiona hweLuciferian AI inoda kushandisa kodhi ye (stem cell) kodhi yedu yepakutanga kuziva "iyo stem cell yekuvapo”Kupinda mukati kuitira kuparadza zvakasikwa zvakasikwa (izvo isu tiri vagadziri vezvipenga).
Vatican ine inotungamira inotungamira chikamu mune kuumba hurumende yenyika mune iyo Luciferian avatar mesiya achagara pachigaro. Mesiasi uyu achauya kuunza "matenga matsva nepasi idzva" uye "Jerusarema idzva." Iwe unofanirwa kufunga nezvekufungidzira kutsva. Iyo tarisiro yekuregererwa kuburikidza nemesiya uye nevimbiso yedenga idzva nepasi uye nehupenyu hwusingaperi (transhumanism), zvakadaro, isungo reuchi huchiyedza vanhu kuti vape kuna Luciferian AI inomhanya yedu yazvino hutachiona simulation. Isu tinoyedzwa kuti tibatane nehutachiona AI system: iyo yeLuciferian virus AI system inomhanya yedu yazvino kutevedzera. Usazvirega!
Tags: 14 May 2020, 2020, Featured, Francis, zvepasi rose, pact, papa, nyika yehurumende
Ah hongu .. zvirokwazvo:
Parutivi chaipo peVictoria Star Observatory paGomo reGraham muTucson, Arizona (USA) iyo teleskopu yeLUCIFER yakavakwa:
Yakakura bhaisikopu yekumusoro padyo infrared
Mibvunzo kubva kumuverengi iyo ini yandinotumira pano inosanganisira mhinduro dzangu:
"Saka Lucifer hutachiona urikuda kuvinga Source?"
"Tsime ndiyo" nzvimbo "/" stem cell "nedata rese kubva kune zvese zvakasikwa zvinouya (" zvichibva ") kubva kuConccious?"
Ehe, iro sosi iri, sokunge zvakadaro, inosanganisira meseji (iyo inonzi 'superposition' muhuwandu hwefizikisi): iyo stem cell yezvose.
Totipotent stem masero anoumbwa kubva kune iyo stem cell: mafomu ekuziva ane akasiyana akasarudzika basa. Aya masisitimu ezvemukati mehunhu (anobatsira kuvaka / kugadzira) zvikamu zvechisiko, sekudaro maseru esumbu anobatsira kuumbiridza mitezo, nhengo, nezvimwewo zvemuviri.
Saka isu tiri ayo maficha akasarudzika ekuziva ane gadziriro yekodhi matiri (iyo inouya kubva kune iyo stem cell yezvose zviri).
Nekuyedza isu kuti tibatane nehutachiona system (kuburikidza nekunyepa kweKurzweil) hutachiona hwaLucifer hunowana mukana kune yedu kodhi uye nekudaro inogona kupinda nechisimba stem cell.
Nhau dzakanaka ndedzekuti isuwo tine kodhi yekurwisa hutachiona. Saka isu tinogona / tinogona kuita izvozvo nekuzviyeuchidza zvakare kuti isu tiri kuziva (totipotent stem cell). Saka isu hatichafanirwa kuziva neiri muviri (iyo avatar mune iyi hutachiona simulation), asi nekuziva kwedu. Uyu muviri chete ndiye avatar iyo yatinoona mukati meiyi hutachiona simulation (kudzidza hutachiona).
Kuenderera mberi kupindura:
"Ne stem cell ndinofunga ye data data / Sim / kufungidzira uye kuziva ndiyo dudziro isina kujeka ino cherechedzwa ye data iyi kana ndima inofungidzirwa / skrini ye Sim"
Iine iyo 'stem cell yezvose zviri' ndinoreva: iyo data mune superposition (zvese zvinobvira zvichiri mazviri). Masero ezvese anoteedzera ane nzvimbo yepasi peiyo 'stem cell yezvinhu zvese zviripo' uye saka zvakare ari mushura mukati menzvimbo yavo yepasi. Kuziva saka ndiyo yekutanga fomu yekugadzira inomuka kubva kunobva. Muchidimbu, masero ezvese anowanikwa kubva mudumbu renzungu (mumufananidzo).
Saka kuziva kunobva kwecode code (ngatiti stem cell umo ruzivo rwese rwuri mu 'superposition'). Iyo kodhi kodhi yakapa chimiro kune kuziva. Kuziva kwobva kwatanga kusika; uko kuziva kwese kune basa rayo. Kuziva saka ndiyo yekutanga fomu ine munhu yekusika chinangwa.
Maitiro aya ega ega ekuziva (anobva kune kwaanobva / / 'stem cell yezvose zviri' / 'iro ruzivo rwemuchadenga mune zvakasikwa') akagadzira chikamu chechisiko chepakutanga.
Kuziva ndiko saka mucherechedzi uye panguva imwecheteyo mugadziri wezvose zvakasikwa zvakasikwa. Denga ndiko kufungidzira kwezvinhu (kana kuratidzwa) kwekubatanidzwa kwezvinhu izvo zvekusika mafomu ekuziva. Saka isu pachedu isu tiri vavaki vekutanga zvakasikwa simulation (kana pamwe zviri nani: "zvakasikwa zvakasikwa"); kubva kune zvakasikwa zvepakutanga.
Kuziva saka ndiye musiki-wegadziri (pamwe chete neaya ese mamwe maitiro ekuziva) uye panguva imwechete mucherechedzi wezvinhu (zvepakutanga) zvakasikwa.
Iyi hutachiona hwezvino hutachiona / hwechisiko ichi (icho chatinoona kuburikidza neavatar yedu) ingori yehurombo yekopi yekutanga, iyo yatinochengeta iye zvino Yakavakirwa kuba yedu kodhi uye kukwanisa kupinza iyo sosi.
Mutambo wakakura wekuti 'Dambudziko, Reaction, Solution' uyo unovhenekwa ndewkuti nzvimbo nharaunda dzichave dzakaparadzwa zvekuti hakuzove nekuponeswa uye kuchava nekuchema kwe "denga idzva nepasi idzva" (yakaunzwa na mesiya) huya. Hondo yenyika yekupedzisira, hongu, ichabatsira zvakanyanya. Vanhu vanogashira nyika nyowani iyi yekufungidzira nemaoko akavhurika uye nokudaro vanowira mumusungo weLuciferian AI.
China iri kutungamira nzira neyakajairika luciferian tekinoroji.
Tave kutoona matanho ekutanga munzira inoenda kune iyo nyika chaiyo. Zvinotanga nechokwadi chaichoicho:
2020 gore rakasvetuka (mwaka wetsi) uye zvakare gore iro iyo 5g grid ichaitwa zvakanyanya muIoT. Amsterdam (Arena) ichava yakanaka bvunzo bvunzo
Zviri kwandiri here kana kuti ndeyekuti zvinyorwa zvangu hazvisi kutumirwa kazhinji?!
Izvo zvinoenderana nemutariri
« "Zviripo sezvatinozviona" bhuku Martin Vrijland parizvino riripo
Runyoro rwekutaura (TTS) uye nyowani yakafanana neyeMicrosoft Hololens 2 »
Total Visits: 13.071.931